“Ndimi Zvapupu Zvangu”! — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
ip-2 chits. 4 pp. 46-60
“Ndimi Zvapupu Zvangu”!
Uprofita hwaIsaya—Chiedza Chavanhu Vose II
Mabhiza Ehondo Anowa, Majeri Anovhurika
Jehovha Anotungamirira Vanhu Vake Zvakachengeteka Kuenda Kumusha
Jehovha Anozivisa Kurwadziwa Kwake
Chirango Chinokohwa Zvibereko
Zvapupu Zvinorwisana Navamwari Venhema
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—1995
1. Jehovha anoshandisa sei uprofita, uye vanhu vake vanofanira kuita sei nouprofita hwakazadzika?
KUKWANISA kufanotaura zviri mberi ndechimwe chinhu chinosiyanisa Mwari wechokwadi navanamwari vose venhema. Asi Jehovha paanoprofita, anenge achifunga zvinopfuura kungoratidza kuti ndiye Mwari. Sezvinoratidzwa muna Isaya chitsauko 43, Jehovha anoita kuti uprofita huve uchapupu hwokuva Mwari kwake uye kuda kwake vanhu vake vesungano. Vanhu vakewo, havafaniri kungonzwisisa uprofita hwakazadzika vobva varamba vakasona muromo; vanofanira kupupura zvavanenge vaona. Hungu, vanofanira kuva zvapupu zvaJehovha!
2. (a) Chimiro chomudzimu chaIsraeri munguva yaIsaya chakadini? (b) Jehovha anovhura sei maziso evanhu vake?
2 Zvinosuruvarisa kuti munguva yaIsaya Israeri ari muchimiro chinosiririsa zvokuti Jehovha anoona vanhu vacho sezvirema zvomudzimu. “Uyai namapofu, ane meso hawo, nematsi, dzine nzeve hadzo.” (Isaya 43:8) Vanhu mapofu uye matsi dzomudzimu vangashumira Jehovha sei sezvapupu zvake zvipenyu? Pane nzira imwe bedzi. Maziso avo nenzeve dzavo zvinofanira kuvhurwa nenzira inoshamisa. Uye Jehovha anovavhura zvechokwadi! Sei? Kutanga, Jehovha anopa chirango chakakomba—vagari voumambo hwokumusoro hwaIsraeri vanotapwa muna 740 B.C.E., uye venyika yeJudha, muna 607 B.C.E. Ipapo, Jehovha anorwira vanhu vake nesimba nokuvasunungura nokudzorera vakasara vakapfidza uye vakanga vave nesimba idzva romudzimu kunyika yokumusha kwavo muna 537 B.C.E. Kutaura chokwadi, Jehovha ane chokwadi kwazvo chokuti chinangwa chake panhau iyi hachingakundikaniswi zvokuti pachine makore 200, anotaura nezvokusunungurwa kwaIsraeri sokunge kwatoitika.
3. Jehovha anopa kurudziro yei kuvachazova nhapwa munguva yemberi?
3 “Asi zvino zvanzi naJehovha, wakakusika, iwe Jakobho, wakakuumba, iwe Israeri: Usatya hako, nokuti ndakakudzikinura; ndakakudana nezita rako, uri wangu. Kana uchipinda nomumvura zhinji, ndichava newe, kana nomunzizi, hadzingakunyudzi; kana uchifamba nomumoto, haungatsvi, nomurazvo haungakupisi. Nokuti ndini Jehovha Mwari wako, Mutsvene waIsraeri, Muponesi wako.”—Isaya 43:1-3a.
4. Zvakadaro sei kuti Jehovha ndiye Musiki waIsraeri, uye chipikirwa chei chaanopa vanhu vake pamusoro pokudzokera kwavo kunyika yokumusha kwavo?
4 Jehovha anofarira Israeri kwazvo nokuti rudzi rwacho nderwake. Chisikwa chake pachake mukuzadzika kwesungano yaAbrahamu. (Genesi 12:1-3) Nokudaro, Pisarema 100:3 rinoti: “Zivai kuti Jehovha ndiye Mwari; ndiye wakatiita, tiri vanhu vake; tiri vanhu vake nemakwai anofudzwa naye.” Sezvo ari Musiki noMudzikinuri waIsraeri, Jehovha achadzorera vanhu vake zvakachengeteka kunyika yokumusha kwavo. Mhinganidzo, dzakadai semvura, nzizi dzakazara, uye marenje anopisa, hazvizovadzivisi kana kuti kuvakuvadza, sezvo zvinhu zvakadaro zvisina kunonotsa madzitateguru avo paaienda kuNyika Yakapikirwa mazana emakore akanga apfuura.
5. (a) Mashoko aJehovha anonyaradza sei Israeri womudzimu? (b) Ndivanaani vari shamwari dzaIsraeri womudzimu, uye ivava vakafanofananidzirwa naani?
5 Mashoko aJehovha anonyaradzawo vasara vomuzuva ranhasi vaIsraeri womudzimu, avo mumwe nomumwe wavo ari “chisikwa chitsva” chakaberekwa nomudzimu. (2 VaKorinde 5:17) Pashure pokunge vazvipira kupinda mu“mvura” yevanhu, vakafara nokudzivirirwa norudo naMwari nomumafashamo okufananidzira. Moto unobva kuvavengi vavo hauna kuvakuvadza, asi wakatoshanda kuvanatsa. (Zekaria 13:9; Zvakazarurwa 12:15-17) Kutarisira kwaJehovha kwakasvikawo ku“boka guru revanhu” re“mamwe makwai,” akabatana norudzi rwomudzimu rwaMwari. (Zvakazarurwa 7:9; Johani 10:16) Ivavo vakafananidzirwa ne“vanhu vazhinji vakanga vakavhengana” avo Vakabuda kubva Ijipiti pamwe nevaIsraeri uyewo nevakanga vasiri vaJudha vakadzokera nenhapwa dzakanga dzasunungurwa dzaibva kuBhabhironi.—Eksodho 12:38; Ezra 2:1, 43, 55, 58.
6. Jehovha anozviratidza sei kuva Mwari weruramisiro pamusoro pokudzikinura (a) Israeri wenyama? (b) Israeri womudzimu?
6 Jehovha anopikira kununura vanhu vake paBhabhironi achishandisa mauto eMedhia nePersia. (Isaya 13:17-19; 21:2, 9; 44:28; Dhanieri 5:28) Sezvo ari Mwari weruramisiro, Jehovha acharipira “vashandi” vake veMedhia nePersia rudzikinuro rwakakodzera kuti achinjane nokuda kwaIsraeri. “Ndakaisa [Ijipiti] ruve rudzikinuro rwako. Etiopia neSeba panzvimbo yako. Zvawakanga uchikosha pamberi pangu, uchikudzwa nokudikanwa neni, naizvozvo ndichaisa vanhu panzvimbo yako, namarudzi avanhu panzvimbo youpenyu hwako.” (Isaya 43:3b, 4) Zviri munhau dzakaitika zvinopupurira kuti Umambo hwePersia hwakakunda Ijipiti, Etiopia, uye Seba iri pedyo, seizvo Mwari akafanotaura chaizvo. (Zvirevo 21:18) Muna 1919 achishandisa Jesu Kristu, Jehovha nenzira yakafanana akasunungura vakasara vaIsraeri womudzimu pakuva nhapwa. Zvisinei, nokuda kwebasa rake, Jesu aisada mubayiro. Akanga asiri mutongi wechihedheni. Uye akanga achisunungura hama dzake pachake dzomudzimu. Kunze kwezvo, muna 1914, Jehovha akanga atomupa “ndudzi ive nhaka yak[e], nemigumo yenyika zvive zvak[e].”—Pisarema 2:8.
7. Jehovha anonzwa sei nezvevanhu vake, munguva yekare uye yazvino?
7 Ona nzira iyo Jehovha anoratidza nayo pachena manzwire ake ounyoro kunhapwa dzaakadzikinura. Anodziudza kuti dzino“kosha” uye dzino“kudzwa” naye uye anodzi‘da.’ (Jeremia 31:3) Anonzwa saizvozvo—kunyange kupfuura ipapo—kuvashumiri vake vakavimbika nhasi. VaKristu vakazodzwa vakapinzwa muukama naMwari, kwete nokuberekwa, asi nokushanda kwomudzimu mutsvene waMwari pashure pokuzvitsaurira kwavo pachavo kuMusiki wavo. Jehovha akakwevera ivava kuMwanakomana wake uye kwaari ndokunyora mitemo yake nenheyo pamwoyo yavo inonzwa.—Jeremia 31:31-34; Johani 6:44.
8. Jehovha anovimbisei nhapwa, uye dzichanzwa sei pamusoro pokununurwa kwadzo?
8 Achitowedzera kuvimbisa nhapwa dzacho, Jehovha anowedzera kuti: “Usatya hako, nokuti ndinewe; ndichauyisa vana vako vabve kumabvazuva, nokukuunganidza ubve kumavirazuva; ndichati kurutivi rwokumusoro: Varege; nokurutivi rwezasi: Usavadzivisa; uyai navanakomana vangu vari kure, navakunda vangu vari kumigumo yenyika.” (Isaya 43:5-7) Kunyange nzvimbo dziri kure kwazvo dzepasi hadzizovi dzisingasvikiki kuna Jehovha panosvika nguva yokuti asunungure vanakomana nevanasikana vake uye kuti avadzose kunyika yokumusha kwavo inodiwa. (Jeremia 30:10, 11) Pasina mubvunzo, sokuona kwavo kusunungurwa uku kuchapfuura kununurwa kwakamboitwa rudzi rwacho muIjipiti.—Jeremia 16:14, 15.
9. Jehovha anorondedzera mabasa ake okununura munzira dzipi mbiri?
9 Nokuyeuchidza vanhu vake kuti vanodanwa nezita rake, Jehovha anosimbisa chipikirwa chake chokununura Israeri. (Isaya 54:5, 6) Chinotokosha zvikuru, Jehovha anobatanidza zita rake nezvipikirwa zvake zvokusunungura. Mukuita kudaro, anova nechokwadi chokuti iye achagamuchira mbiri apo shoko rake rouprofita richazadzika. Hapana kunyange mukundi weBhabhironi achave nekodzero yorukudzo rwakafanira Mwari mumwe bedzi mupenyu.
10. Jehovha anoisa muedzo wei pamberi pemarudzi navanamwari vawo?
10 Jehovha zvino anopikira kusunungura Israeri achishandisa dare renyika yose apo anoisa vanamwari vemarudzi pakutongwa. Tinoverenga kuti: “Marudzi ose ngaaunganidzwe pamwe chete, navanhu vakokerwe; ndianiko [wevamwari vavo] pakati pavo ungatiudza izvozvi, ungatiratidza zvinhu zvekare? Ngavauye [vanamwari vavo] nezvapupu zvavo, varuramiswe; ngavanzwe, vati: Izvokwadi.” (Isaya 43:9) Jehovha anoisa muedzo wakaoma pamberi pemarudzi enyika. Chaizvoizvo ari kuti: ‘Vanamwari venyu ngavaratidze kuti ndivanamwari nokufanotaura nguva yemberi zvakarurama.’ Sezvo ari Mwari wechokwadi bedzi anogona kuprofita asingakanganisi, muedzo uyu uchafumura vanyengeri vose. (Isaya 48:5) Asi Wemasimba Ose anotowedzera chimwezve chinodiwa nomutemo: Vose vanoti ndivanamwari vechokwadi vanofanira kuunza zvapupu, zvezvavanofembera nokuzadzika kwazvo. Sezvingatarisirwa, Jehovha haazvisiyi pachinodiwa nomutemo ichi.
11. Jehovha anopa muranda wake basa rei, uye Jehovha anozivisei pamusoro pokuva kwake Mwari?
11 Sezvo vasina simba, vanamwari venhema havagoni kuunza zvapupu. Nokudaro zvinotonyadzisa kuti panomira zvapupu panoramba pasina munhu. Asi zvino inova nguva yaJehovha yokuti aratidze kuva Mwari kwake. Achitarisa kuvanhu vake anoti: “Ndimi zvapupu zvangu, nomuranda wangu, wandakasanangura; kuti muzive, mugonditenda, munzwisise kuti ndini iye; hakuna mumwe mwari wakanditangira pakuumbwa, shure kwangu hakungazovipo mumwe. Ini, iyeni, ndiJehovha, kunze kwangu hakuna mumwe muponesi. Ini ndakaparidza, ini ndakaponesa, ini ndakaratidza kwakanga kusina mwari wokumwe pakati penyu; saka imi muri zvapupu zvangu, neni ndiri Mwari, . . . Zvirokwazvo, kubva zuva ranhasi ndini iye; hakuna ungarwira munhu paruoko rwangu; ini ndichabata basa, ndiani [ungadzivisa ruoko rwangu]?”—Isaya 43:10-13.
12, 13. (a) Uchapupu hwakawanda hwechii uhwo vanhu vaJehovha vanahwo hwokupa? (b) Zita raMwari rakaenda pamberi sei munguva dzazvino?
12 Mukupindura mashoko aJehovha, nenguva isipi panomira zvapupu panozara neboka rinofara rezvapupu. Uchapupu hwazvo hwakajeka uye hahuna mubvunzo. SaJoshua, zvinopupurira kuti ‘zvose zvakataurwa naJehovha zvakaitika. Hapana kana shoko rimwe rakakona.’ (Joshua 23:14) Achiri kurira munzeve dzevanhu vaJehovha ndiwo mashoko aIsaya, Jeremia, Ezekieri, nevamwe vaprofita avo, sokunge nenzwi rimwe, vakafanotaura nezvokuitwa nhapwa kwaJudha nokununurwa kwake nenzira inoshamisa kubva kwaakatapwa. (Jeremia 25:11, 12) Mununuri waJudha, Koreshi, akataurwa nezita nguva refu asati atomboberekwa!—Isaya 44:26–45:1.
13 Tichifunga nezvomurwi wouchapupu uyu, ndiani angaramba kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi bedzi? Kusiyana navanamwari vechihedheni, Jehovha bedzi ndiye asina kusikwa; iye oga ndiye Mwari wechokwadi.* Saka vanhu vane zita raJehovha vane ropafadzo yakasiyana neyevamwe uye inofadza yokurondedzera mabasa ake anoshamisa kuzvizvarwa zvomunguva yemberi uye kune vamwe vanobvunza nezvake. (Pisarema 78:5-7) Saizvozvowo, Zvapupu zvaJehovha zvomuzuva ranhasi zvine ropafadzo yokuzivisa zita raJehovha munyika yose. Muma1920 Vadzidzi veBhaibheri vakawedzera kuziva kukosha kukuru kwezita raMwari, Jehovha. Zvadaro, musi waJuly 26, 1931, pakokorodzano muColumbus, Ohio, purezidhendi weSosaiti, Joseph F. Rutherford, akasuma chisarudzo chaive nomusoro wokuti “Zita Idzva.” Mashoko okuti, “Tinoda kuzivikanwa uye kudanwa, kutaura zvazviri, nezita rokuti Zvapupu zvaJehovha,” akafadza vaipinda kokorodzano yacho, avo vakabvuma chisarudzo chacho na“Hungu!” akasimba. Kubvira ipapo, zita raJehovha rakawedzera kuzivikanwa munyika yose.—Pisarema 83:18.
14. Jehovha anoyeuchidza vaIsraeri nezvechii, uye nei chiyeuchidzo ichi chakakodzera nguva yacho?
14 Jehovha ane hanya nevanhu vanotakura zita rake norukudzo, achivaona se“mboni yeziso rake.” Anoyeuchidza vaIsraeri nezvazvo, achivaudza kuti akavanunura sei muIjipiti nokuvatungamirira nomurenje zvakachengeteka. (Dheuteronomio 32:10, 12) Panguva iyoyo kwakanga kusina mumwewo mwari pakati pavo, nokuti vakaona nemaziso avo pachavo kunyadziswa chaiko kwevamwari vose veIjipiti. Hungu, vanamwari veIjipiti vose vakatadza kuchengetedza Ijipiti kana kuti kudzivisa vaIsraeri kuenda. (Eksodho 12:12) Saizvozvowo, Bhabhironi rine simba, iro nyika dzaro dzomumadhorobha dzakazara netemberi dzinenge 50 dzavanamwari venhema, richakundikana kumisa ruoko rweWemasimba Ose paanosunungura vanhu vake. Sezviri pachena, “hakuna mumwe muponesi” kunze kwaJehovha.
15. Jehovha anoprofita chii pamusoro peBhabhironi?
15 “Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri wenyu, Mutsvene waIsraeri: Ndakatuma vanhu Bhabhironi, nokuda kwenyu, ndichavaburusa vose vachitiza, ivo vaKardhea muzvikepe zvavo zvomufaro. Ndini Jehovha, Mutsvene wenyu, Musiki waIsraeri, Mambo wenyu. Ndizvo zvinotaura Jehovha, unoita nzira mugungwa, negwara pakati pemvura zhinji ine simba; unobudisa ngoro nebhiza, nehondo noune simba; vanovata pasi pamwe chete, havangamukizve; havachapfuti, vadzimwa somwenje.”—Isaya 43:14-17.
16. Chii chichawira Bhabhironi, vatengesi vevaKardhea, nevose vachada kudzivirira Bhabhironi?
16 Bhabhironi rakaita sejeri kunhapwa pakuti rinovatadzisa kudzokera Jerusarema. Asi zvakadzivirira Bhabhironi hazvisi mhinganidzo kune Wemasimba Ose, uyo kare Akamboita “nzira mu[Gungwa Dzvuku], negwara pakati pemvura zhinji ine simba”—sezviri pachena iya yeJodhani. (Eksodho 14:16; Joshua 3:13) Saizvozvowo, mumiririri waJehovha, Koreshi, achaita kuti Yufratesi rune simba ruserere, zvichiita kuti varwi vake vapinde muguta. Vatengesi vevaKardhea vanokwasva nomumigero yeBhabhironi—migero yemvura yezviuru zvemakoronga ezvokutengeserana uye yezvikepe zvinotakura vanamwari veBhabhironi—vachachema nokurwadziwa apo guta ravo guru rinowa. Sengoro dzehondo dzaFarao muGungwa Dzvuku, ngoro dzehondo dzinomhanya dzeBhabhironi dzichava dzisingabatsiri. Hadzizoriponesi. Nyore nyore sokudzima kunoita munhu mwenje werambi remafuta, mupambi wacho achatsvaira upenyu hwevachada kuridzivirira vacho.
17, 18. (a) Jehovha anoprofita chinhu “chitsva” chipi? (b) Munzirai umo vanhu vasingafaniri kurangarira zvinhu zvapfuura, uye nei?
17 Achienzanisa mabasa ake okununura aakamboita nezvaava kuda kuita, Jehovha anoti: “Musarangarira zvinhu zvapfuura, musafunga zvakare. Tarirai, ndichaita chinhu chitsva; chobuda zvino; hamungachizivi here? Ndichaita nzira murenje, nenzizi musango. Mhuka dzebundo dzichandikudza, makava nemhou; nokuti ndinobudisa mvura zhinji murenje, nenzizi musango, kuti ndipe vanhu vangu, ivo vakasanangurwa, vanwe, ivo vanhu vandakazviumbira, kuti vaparidze kurumbidzwa kwangu.”—Isaya 43:18-21.
18 Mukutaura kuti, “musarangarira zvinhu zvapfuura,” Jehovha haasi kukurudzira kuti vashumiri vake vadzime mupfungwa dzavo mabasa ake okuponesa akapfuura. Kutaura chokwadi mazhinji emabasa aya rutivi rwenhoroondo yevaIsraeri yakafuridzirwa naMwari, uye Jehovha akarayira kuti kupukunyuka muIjipiti kuyeukwe gore negore pakuchengeta Paseka. (Revhitiko 23:5; Dheuteronomio 16:1-4) Zvisinei, Jehovha zvino anoda kuti vanhu vake vamukudze nokuda kwe“chinhu chitsva”—chimwe chinhu chavachazvionera. Izvi hazvingosanganisiri kununurwa kwavo kubva kuBhabhironi asiwo rwendo rwavo runoshamisa kudzokera kumusha, pamwe vachishandisa nzira yomurenje inoti dimbudzirei. Munyika yakaoma iyoyo, Jehovha achavaitira “nzira” uye achaita mabasa esimba akafanana neaakaitira vaIsraeri muzuva raMosesi—zvechokwadi, achagovera vanodzoka zvokudya murenje nokupedza nyota yavo nenzizi chaidzo. Zvichagoverwa naJehovha zvichave zvakawanda zvokuti kunyange mhuka dzomusango dzicharumbidza Mwari dzorega kurwisa vanhu vake.
19. Vasara vaIsraeri womudzimu neshamwari dzavo vanofamba sei mu“Nzira Youtsvene”?
19 Saizvozvowo, muna 1919 vakasara vevaIsraeri vomudzimu vakasunungurwa pakutapwa neBhabhironi, uye vakapinda munzira iyo Jehovha akanga avagadzirira, “Nzira Youtsvene.” (Isaya 35:8) Kusiyana nevaIsraeri, vaisafanira havo kufamba nomurenje rinopisa vachibva kune imwe nzvimbo vachienda kune imwe, uye rwendo rwavo haruna kupedzwa pashure pemwedzi mishomanana nokusvika muJerusarema. Zvisinei, “Nzira Youtsvene” yakatungamirira vaKristu vakazodzwa vakasara kuparadhiso yomudzimu. Kana vari ivo, vanoramba vari mu“Nzira Youtsvene” iyoyo, sezvo vachiri kufanira kufamba nomunyika ino. Chero bedzi vakaramba vari munzira—chero bedzi vakaramba vachichengeta mitemo yaMwari yorucheno noutsvene—vanoramba vari muparadhiso yomudzimu. Uye vanofara sei kubatana neboka guru reshamwari “dzisiri vaIsraeri”! Kusiyana kwazvo nevanovimba nenyika yaSatani, vasara neshamwari dzavo vanoramba vachifadzwa nemabiko ezvakakora omudzimu anobva kuna Jehovha. (Isaya 25:6; 65:13, 14) Vachiona chikomborero chaJehovha pavanhu vake, vazhinji vakaita semhuka vakachinja nzira dzavo ndokurumbidza Mwari wechokwadi.—Isaya 11:6-9.
20. Israeri womuzuva raIsaya atadzira Jehovha sei?
20 Munguva dzekare, vaIsraeri vakasara vakadzorerwa vava vanhu vakachinja kana vachienzaniswa nechizvarwa chakaipa chaIsaya. Nezvechizvarwa chakaipa Jehovha anoti: “Kunyange zvakadaro hauna kudana kwandiri, iwe Jakobho; asi wakaneta neni iwe Israeri. Hauna kundivigira makwai ako zvive zvipiriso zvingapiswa; hauna kundikudza nezvibayiro zvako. Handina kukuremedza kuti uuye nezvipiriso zvoupfu, handina kukunetsa ndichiti uuye nezvinonhuwira. Hauna kunditengera ipwa nemari, hauna kundigutisa namafuta ezvibayiro zvako; asi wakandiremedza nezvivi zvako, wakandinetsa nezvakaipa zvako.”—Isaya 43:22-24.
21, 22 (a) Nei zvinganzi zvinodiwa naJehovha hazviremi? (b) Chaizvoizvo, vanhu vanoita kuti Jehovha avashumire sei?
21 Mukuti, “handina kukuremedza kuti uuye nezvipiriso zvoupfu, handina kukunetsa ndichiti uuye nezvinonhuwira,” Jehovha haasi kureva kuti zvipiriso nezvinonhuwira (chimwe chezvinonhuwira zvitsvene) hazvidikanwi. Zvechokwadi, izvi zvinhu zvinokosha zvokunamata kwechokwadi musungano yoMutemo. Zvimwezvo ndizvowo ne“ipwa,” iyo inoreva karamusi inonhuwira zvakanaka, musanganiswa wemafuta matsvene okuzodzesa anonhuwira zvakanaka. VaIsraeri vave vachiregeredza kushandisa izvi mubasa repatemberi. Asi zvinodiwa izvi zvinorema here? Aiwa hazvimboremi! Zvinodiwa naJehovha zvakareruka kana zvichienzaniswa nezvavanamwari venhema. Somuenzaniso, mwari wenhema Moreki aida zvibayiro zvevana—chimwe chinhu icho Jehovha asati amborayira!—Dheuteronomio 30:11; Mika 6:3, 4, 8.
22 Kudai vaIsraeri vainzwisisa havo zvinhu zvomudzimu, kana zvakadaro vaisazombo‘neta naJehovha.’ Nokutarira muMutemo wake, vaizoona rudo rwake rwakadzama kwavari uye vomupa “mafuta” nomufaro, zvakanakisisa zvezvibayiro zvavo. Panzvimbo pokudaro vanozvichengetera mafuta nokukara. (Revhitiko 3:9-11, 16) Rudzi rwakaipa urwu runonetsa Jehovha sei nomusengwa wezvivi zvarwo—nokudaro, ruchiita kuti Jehovha arushumire!—Nehemia 9:28-30.
23. (a) Nei chirango chaJehovha chakafanira kwazvo? (b) Chii chinobatanidzwa mukuranga Israeri kwaMwari?
23 Kunyange zvazvo chakakomba, uye chakakodzera kudaro, chirango chaJehovha chinoita zvinodiwa, chichiita kuti tsitsi dzibvire. “Ini, iyeni, ndini ndinodzima kudarika kwako nokuda kwangu, handicharangariri zvivi zvako. Ndiyeudzire, ngatitaurirane; rondedzera, kuti ururamisirwe. Teteguru vako vakatadza, navadudziri [“vaturikiri,” NW, Ref., mashoko omuzasi] vako vakandidarikira. Naizvozvo ndakamhura machinda matsvene; Jakobho ndakamuita chinhu chakatukwa, naIsraeri chinhu chinosekwa.” (Isaya 43:25-28) Semarudzi ose enyika, Israeri anobva kuna Adhamu, “teteguru.” Nokudaro hapana muIsraeri anogona kuratidza kuti ano“ruramis[wa].” Kunyange “vadudziri” vaIsraeri—vadzidzisi vake, kana kuti vaturikiri voMurayiro—vakatadzira Jehovha uye vakadzidzisa nhema. Nokudaro, Jehovha achaendesa rudzi rwake rwose “kukuparadzwa” uye “chinhu chakatukwa.” Achashatisawo vose vanoshumira pa“nzvimbo tsvene.”
24. Jehovha achakanganwira vanhu vake—vekare nevazvino—nokuda kwechikonzero chikuru chei, asi anonzwa sei pamusoro pavo?
24 Zvisinei, ona kuti tsitsi dzaMwari hadzizongovapo nemhaka yokupfidza kwaIsraeri; dzichava nokuda kwaJehovha pachake. Hungu, zita rake rinobatanidzwa. Kudai aizosiya Israeri ari nhapwa zvachose, zita rake raizozvidzwa nevaiona. (Pisarema 79:9; Ezekieri 20:8-10) Saizvozvowo nhasi, kuponeswa kwevanhu kunouya munzvimbo yechipiri kuchitevera kutsveneswa kwezita raJehovha nokurevererwa kwouchangamire hwake. Kunyange zvakadaro, Jehovha anoda vanogamuchira chirango chake vasingazezi uye vanomunamata nomudzimu nechokwadi. Anoratidza rudo rwake kuna ivava—vangave vakazodzwa kana kuti mamwe makwai—nokudzima kudarika kwavo nemhaka yechibayiro chaJesu Kristu.—Johani 3:16; 4:23, 24.
25. Zvinhu zvipi zvinoshamisa zvichaitwa naJehovha munguva pfupi iri mberi, uye tingaratidza sei kuonga kwedu zvino?
25 Uyezve, nokukurumidza Jehovha acharatidza rudo rwake kuboka guru revanhu revanamati vake vakavimbika paachavaitira chimwe chinhu chitsva nokuvanunura nomu“kutambudzika kukuru” vachipinda mu“pasi idzva” rakacheneswa. (Zvakazarurwa 7:14; 2 Petro 3:13) Vachapupurira kuratidzwa kwesimba raJehovha kunoshamisa zvikuru pane kwose kwati kwamboonekwa nevanhu. Tarisiro ine chokwadi yechiitiko ichocho inoita kuti vakazodzwa vasara uye vose vachaumba boka guru revanhu vafare uye kurarama zuva rimwe nerimwe maererano nebasa iroro rakakwirira rokuti: “Ndimi zvapupu zvangu”!—Isaya 43:10.
Mungano dzemarudzi, vanamwari vazhinji vano“berekwa” uye vane “vana.”
[Mufananidzo uri papeji 48, 49]
Jehovha achatsigira vaJudha munzira yokudzokera kumusha kuJerusarema
[Mifananidzo iri papeji 52]
Jehovha anorayira kuti marudzi abudise zvapupu zvavanamwari vawo
1. Mufananidzo waBhaari webhuronzi 2. Zviumbwa zvevhu zvaAshtoreti 3. Utatu hweIjipiti hwaHorus, Osiris, naIsis 4. Vanamwari vevaGiriki Athena (kuruboshwe) naAphrodite
[Mifananidzo iri papeji 58]
“Ndimi zvapupu zvangu.”—Isaya 43:10